ကိန်းတွေ့လျက်ငြား - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိန်းတွေ့လျက်ငြား ကဗျာကို မောင်းထောင်းဦးကျော်လှ ရေးသားခဲ့သည်။ သံချို ကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အမရပူရမြို့တည်နန်းတည် ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက် အနုရာဓ၊ ဇေဋ္ဌမူလာသန်နက္ခတ်များပေါ်သို့ စနေဂြိုဟ်ရောက်တော့မည်။ မူလနက္ခတ်သည် စနေနက္ခတ်ဖြစ်သည်။ စနေဂြိုဟ် စနေနက္ခတ်နှင့်တွေ့လျှင် ဆိုးသည်ဟု ရခိုင်ဗေဒင်ကျမ်းကြီး၌ ပါသည်၊ မှန်မည်လားဟု မောင်ထောင်သာသနာပိုင်ကြီးအား လျှောက်ရာ လမ်းမှန်လျှင် မဆိုး၊ ဖောက်ပြန်လျှင်ဆိုးကြောင်းကို ရာဇဝင်သက်သေနှင့် ပြကာ မိန့်ဆိုသည်။ ယခုသည် ဤကိန်းကြုံလာသည်ကို ကြိုတင်နိမိတ်ဖတ်ကာ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။
တဆဲ့နှစ်ရာသီ လှည့်ကာရုန်းလို့၊ လသုံးဆယ် တခွင်နေခဲ့၊ နှစ်ပေါင်းရေ သုံးဆယ်ကျလျှင်ဖြင့်၊ မူလစနေသို့၊ ဂြိုဟ်စနေလွှမ်းကာ စီးနေကျ၊ နန်းထီးစံ ဘုရင်နှင့်၊ ရဟန်းကြီးရှင် ပန်း၍ပင်ထိတ်စေဘို့၊ ဒမ္ဘိက္ခံ ဆန်ရေရှားတတ်သည်တဲ့၊ များလူတို့ သိစေရန်။
ပူရပြည်တည်စံပျော်သည့်၊ မြတ်ဘိုးတော် ဧကရာဇ်ရယ်က၊ ခြေမြစ်စွား စာရခိုင်နှင့်၊ သာသနာပိုင်မောင်းထောင်ကြီးသို့၊ ခိုမှီးကာ ပုစ္ဆာလျှောက်တော့၊ အကောက်ရယ် မကြံလို့၊ မဖောက်ပြန်လမ်းမှန်သွားလျှင်ဖြင့်၊ နဂါးဝယ် ကြယ်မုလနှင့်၊ တူမျှကာ စနေငြိစေတော့၊ ပြေ၏ရန်တယ် မဖြုံသင့်ဟု၊ နိယထုံ သီဟဇာ နှင့်၊ ဗျဂ္ဃစာ ဝဂ္ဂါကျင့်လျှင်ဖြင့်၊ စာနှင့်ပင် အညီဖြစ်တတ်ကဲ့၊ ဤနှစ်တွင် ဝါဆိုဦးက နှစ်စနေ ဂဟေပူးမိမှ၊ ထွေထူးကာ နောင်ကိုကျုံ့ပြန်ခဲ့၊ ကျားစားတုံ့ပြန်။
သည်ဂြိုဟ်ကြယ် သည်ကိုရောက်လျှင်ဖြင့်၊ ပြည်ပေါက္ကံတရုပ်ပြေးတဲ့၊ မင်းခွေးချေး နတ်ရွာကူးသည့်ပြင်၊ စောလူးနန်းစံကျခဲ့၊ ပန်းမယမှာစံရွှင်တဲ့၊ ငါးစီးရှင်ရာဇာ၏၊ သားကျော်စွာ ခန္ဓာကင်းစဉ်က၊ စီးနင်းသည့် ဂြိုဟ်ပါပတဲ့၊ အင်းဝမြေ သာသည့်တိုင်းတွင်မှ၊ စစ်ကိုင်းမှာ ကိုးကွယ်မှီးတဲ့၊ ငါးထပ်ကြီး ဒါယကာနှင့်၊ မင်းဟံ သာဝကီရောက်ကဲ့ပြင်၊ ထိုနောက်စနေပူးတော့၊ စဉ့်ကူစံ ရေသို့ယွန်းရှာရ၊၊ မြင်ကွန်းစံ ပုန်ကန်ရေးက၊ ဘထွေးတော် အိမ်ရှေ့လောင်းတို့၊ ရွှေ့ပြောင်းကာ စနေထပ်စဉ်က၊ ခေါင်းပြတ်၍ မြေမှာစံ၊ ပြေနိုင်ငံလှုပ်ရှား။
ခွင်ဗြိစ္ဆာ တန်ဆောင်မုန်းမှာတော့၊ နှစ်လုံးပြိုင်ယှဉ်တူပလို့၊ မူလစနေနှင့်၊ ဂြိုဟ်စနေနှစ်ခုနှောကြလိမ့်၊ ဥရောပါဒေသီ၏၊ ဧကရီ ရာဇာက၊ အဖြာဖြာ နိုင်ငံခြုံလျက်ကယ်မို့၊ ရန်သူပုန်ပြိုလို့အေးတန်ရဲ့၊ ဟိုရှေးအစဉ်စဉ်က၊ ရှင်ဘုရင် ခန္ဓာပြောင်းနေကျ၊ စာဟောင်းမှန်ကျမ်းဂန်ထွက်ရယ်နဲ့၊ ပြန်ဗျဂ္ဃာနောက်ကို ရွှေ့ပါလိမ့်၊ စတုံ့အကျန် မြုံ့ပြန်သည့် ဓလေ့ဟာမို့၊ စနေမသမာ ပြေတကာမွှေ့နေကျ၊ ကိန်းတွေ့လျက်ငြား။
၁။ လသုံးဆယ် = စနေဂြိုဟ်သည် တစ်ရာသီလျှင် လပေါင်းသုံးဆယ်နေသည်။
၂။ ဒုမ္ဘိက္ခံ = ဒုမ္ဘိက္ခန္တရကပ်၊ ငတ်မွတ်ခြင်း။
၃။ နိယထုံ = တစ်ရာသီတွင် နေသင့်သည်ထက် ပို၍နေခြင်း။
၄။ သီဟဇာ = ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ရှေ့သို့ထိုးတက်၍ သွားခြင်း။
၅။ ဗျဂ္ဃဇာ = ကျားကဲ့သို့ နောက်ပြန်၍ ရှေ့တက်ခြင်း။
ဤကဗျာခေါင်းစဉ်သည် မောင်းထောင်းဦးကျော်လှ ကိုယ်တိုင် ပေးခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ သင့်တော်မည်ထင်သော ခေါင်းစဉ်ကို ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
↑ (၁၉၈၃ခု၊ နိုဝင်ဘာလ) မောင်းထောင်းဦးကျော်လှ၏ သံချိုကဗျာပေါင်းချုပ်. ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဗိမာန်ဌာန.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိန်းတွေ့လျက်ငြား&oldid=368101" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မေ ၂၀၁၇၊ ၀၀:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။